जनताले ताली पिट्ने गरी खेलकुदमा बजेट विनियोजन गराउँछु’
By dineshfm on	 January 16, 2018 अन्तरवार्ता, खेलकुद, स्थानीय
दीपक जोशी धनगढी माघ २ गते ।
धनगढीमा निजी क्षेत्रबाट फुटबल र क्रिकेटमा सर्बा्धिक धनराशीका दुई ठूला प्रतियोगिता आयोजना भइरहे पनि यहाँ सरकारी लगानी भने न्यून छ । राज्यले हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारेको भनिएको सुदूरपश्चिम अर्थात प्रदेश नम्बर ७ मा अब भने खेलकुदको विकासका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्दै आवश्यक पुर्वाधार निमार्ण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याईएका बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशब बिष्टले आगामी बर्ष यहाँका जनताले ताली पिट्ने गरी बजेट बिनियोजन गराउने दावी गर्नुभएको छ ।
खप्तड गोल्डकपको समापन समारोहमा सहभागी हुन धनगढी पुगेका बिष्टसँग दीपक जोशीले गरेको कुराकानी -:
प्रदेश नम्बर ७ को खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कसरी हेरिरहेको छ ?
हामीले प्रदेश नम्बर ७ भन्दा पनि समग्रमा सबै प्रदेशलाई समान दृष्टिले हेर्ने हो । तर विविध कारणले यो क्षेत्र विगतमा सबै किसिमले पछाडि र्पयो । यसका कारण अनेक हुन सक्लान, तर अब सबार्धिक राशीको क्रिकेट र फुटबल प्रतियोगिताको सफल आयोजना भएपछि धनगढी खेलकुदको केन्द्र बनिसकेको छ । खेलकुदले चिनिन थालेको धनगढीलाई अब हामी बिगतको सट्टाभर्ना हुने गरी बजेट बिनियोजन गर्छाै।
तपाईले भने जस्तै सबार्धिक राशिको फुटबल र क्रिकेट यही हुन्छ तर राज्यले यहाँको खेलकुद विकासका लागि पर्याप्त बजेट दियो त ?
हेर्नुस, खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी नै सानो छ । सानो ढुकुटीबाट सबै क्षेत्रका लागि बजेट बिनियोजन गर्दा यता पनि कम भयो होला तर पर्याप्त बजेट कसलाई भन्ने ? यसको आधार के हो ? हामीले सबै क्षेत्रमा समान किसिमले बजेट बिनियोजन गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
विगतमा सुदूरपश्चिममा कम बजेट बिनियोजन भयो होला तर अब त्यसको सट्टाभर्ना हुने गरी बजेट दिन हामी तयार रहेको कुरा म दोर्होयाएर भन्न चाहन्छु ।
विगतको सट्टाभर्ना हुने गरी बजेट बिनियोजन गर्छाै भन्नुभयो कुन कुन कुरामा बजेट बिनियोजन हुन्छ खुलाइदिनुस न ।
धनगढीमा भर्खरै निजी क्षेत्रको प्रयासमा सर्वा्धिक राशिको खप्तड गोल्डकप भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । सानो अंश जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फत हामीले पनि त्यसमा खर्च र्गयौँ। तर, अब यतिले मात्रै पुग्दैन, आगामी बर्ष खप्तड गोल्डकपलाई रातो किताबमै उल्लेख गरेर यसका लागि पर्याप्त बजेट दिन्छौँ
। डिपिएल क्रिकेटका लागि पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ। धनगढी र महेन्द्रनगरमा खेलकुदका पूर्वाधार निमार्ण गर्न पर्याप्त बजेट दिन्छौँ। पहाडी जिल्लाहरुमा पनि आवश्यकता अनुसार बजेट खर्च गर्छाैँ। समग्रमा यहाँका जनताले ताली पिटेर स्वागत गर्ने गरी खेलकुद क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गराउछौँ। यसमा ढुक्क रहन म प्रदेश नम्बर ७ का जनतालाई आग्रह गर्छु ।
धनगढी रंगशालामा प्याराफिट निमार्णको काम ६ वर्षदेखि रोकिएको छ । यसमा केही काम हुँदैन ?
प्याराफिट निर्माणका काम पनि छिट्टै सुरु गराउने प्रयासमा हामी छौँ। जहाँसम्म निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ, त्यो दिन पनि हामी तयार छौँ तर त्यसका लागि क्षतिपूर्ति कती दिने भनेर मूल्याङ्कन त हुनुर्पयो नि।
हामीले सर्वपक्षीय सहमतिमा मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ । यति भएपछि पुरानो कम्पनीलाई हटाएर नयाँ निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनेछौँ । हामी चारैतिर प्याराफिट निर्माण भइसकेको धनगढी रंगशालामा आगामी खप्तड गोल्डकप सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौँ । यहाँ बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निमार्णको काम पनि केही दिनमै सुरु हुन्छ ।
सर्वाधिक राशिको क्रिकेट प्रतियोगिता हुने धनगढी शहरमा क्रिकेटको रंगशाला नै छैन । फाप्ला मैदान निमार्णको कुरा पनि अहिले हरायो । तपाईँका यी सबै कुरा कसरी पत्याउने?
हो, तपाईँको कुरा मैले मानेँ। तर फाप्ला मैदान निर्माणको काम कसले रोक्यो? काठमाडौँमा बसेर हामीले रोकेका हौँ र? होइन नि। यो त यहाँकै वासिन्दाको विवादका कारण रोकियो । फाप्ला बनाउने कसले? जसले (ड्रिम फाप्ला अभियान) फाप्ला बनाउछौँ भनेर प्रचारवाजी गरिरहेको छ उसलाई फाप्ला बनाउने अधिकार छैन।
किनकी सरकारी जग्गामा सरकारले नै संरचना बनाउने हो। यहाँको जिल्ला खेलकुद विकास समितिमार्फत त्यो बन्ने हो। तर निजी क्षेत्र (ड्रिम फाप्ला अभियानको) को हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण त्यो काम रोकियो। यहाँका जनताले सहमति गरेर आए फाप्ला मैदान निमार्णको काम अगाडि बढ्छ त्यो रोकिदैँन ।
Previous Articleचक्कु प्रहार गरी एक युवकको हत्या
Next Article खप्तड गोल्डकपमा १९ लाखको टिकट बिक्री